Ukushelela kwefonti ne-qtgtkstyle Opensuse 12.3 | Kusuka kuLinux
pvv92 | | Ukusatshalaliswa, I-GNU / Linux, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Impela kungaphezu komuntu oyedwa ohlangabezane nakho, ukuthi kuma-distros no deb, njengomthetho ojwayelekile ukushelelisa ifonti kubi impela, uma kuqhathaniswa nobuntu.
I-Opensuse yayinjalo, ngakho-ke ngaqala ukubheka isisombululo sale nkinga, futhi ngemuva kwamahora amabili ocwaningo ngathola ukuthi ngiyitholile.
Sifaka le ndawo yokugcina nge-yast:
Ngemuva kwalokho siya ku-yast, sicinga nge-yast ukuthola leli khosombe futhi sifaka wonke amaphakheji alo.
Futhi siya ku-yast bese sifaka i-fontconfig infinality.
Lapho iphakethe selifakiwe, sizolungisa ukushelela kwefonti engapheli, okuzenzakalela okuza nobuntu bushelelezi, engingabuthandi kakhulu. Ngakho-ke uvula i-terminal bese ubhala:
Ngaphakathi kwedokhumenti, sibheka umugqa othi "USE_STYLE = »UBUNTU»" Futhi siguqula igama ubuntu, lathi "UKUNGapheleli", Khumbula ukuthi ungakhetha futhi ukusetha kwangaphambili kwamawindi 7, osx, chrome os njll.
Njengefonti ezenzakalelayo yohlelo, ngincamele ukuqhubeka nokusebenzisa i-gnome's cantarell, ngoba kumnandi ukuyifunda.
Sesiqedile, kepha manje sizobona ukuthi lapho uvula uhlelo lwe-qt, akuthathi uhlobo lwefonti lokungapheli futhi amamenyu abonakala ngobukhulu obukhulu.
Ngakho-ke sibhala esigungwini
Manje uma sesiqedile ngempela, futhi sizoba nokubukeka kwalolu hlobo
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Ukusetshenziswa kwefonti ne-qtgtkstyle Opensuse 12.3
Ngikhohliwe ukubeka umthombo:
Sengivele ngiyifaka kokuthunyelwe ..
Ngabe yimina ngedwa engazihluphi ngalokho?
Angiwuboni ngempela umehluko, mhlawumbe ngoba angiboni kahle, kuyaziswa noma kunjalo.
akungikhathazi. Kepha kusiphi isimo sangempela lapho ukushelela kwefonti kufanelekile?
Lowo ngumbono walowo nalowo, ngiyazi ngabantu ukuthi amafonti amabi futhi ayindilinga amancane abukeka, kulapho ewathanda kakhulu, kepha iningi awanalo. Ukushelela kwefonti, ezimeni eziningi kusiza ekucaceni kokufundwayo, futhi futhi kuyisici se-eyecandy, kufana nokubona owesifazane ngaphandle kokwenza izimonyo bese umbona enza kahle i-xD, kuhlala kungowesifazane, kepha ngokuvamile kwesesibili icala babukeka bengcono ahhaaha.
Lokhu kungenye yezinto lapho, ngokungaqondakali, Ubuntu iqhubeka nokusebenzisa okuhle okunye; Ubheka iWindows, ubheka iMacOS noma ubheka Ubuntu futhi kuhle ukuchitha amahora ambalwa phambi kwePC yakho. Amanye ama-distros (angichazela wona) mahle kakhulu…. kepha kufanele usebenze lolu hlobo lwento futhi kwesinye isikhathi ungakutholi okufunayo: ukuthi izinto, izithonjana namafonti abukeka emahle ... nakwizikrini ezinhle, ezichazwe kahle futhi zichazwe kahle.
Kumele ngikutshele ukuthi ngivumelana nawe, ngoba kaningi i-EyeCandy factor iyabhekwa hhayi ikhwalithi yesoftware eyenziwe ngayo (ngiyavuma ukuthi Ubuntu muhle ekuheheni abasebenzisi abasha, kepha kufanele ihlakulele kanjalo ukuthi bayayazi indlela yokusebenzisa ipulatifomu kangcono ukuze bathuthukise ikhwalithi ye-distro).
Noma kunjalo, ngisajabule ngomnikelo owenziwa Ubuntu ekuletheni abasebenzisi abasha emphakathini we-GNU / Linux, ngoba amanye ama-distros ayefuna ukwenza okufanayo, kepha akakwazanga ngenxa yemibono yabo (banikeza nombono wokuba ngaphakathi umphakathi wabalandeli).
I-Nice tuto, kepha ukukhuluma iqiniso, i-OpenSUSE anti-aliasing ayihlukile kakhulu uma iqhathaniswa ne-Debian kanye ne-derivatives (i- "ClearType" yayo ibukhali kakhulu futhi ifundeka kakhulu kune-M $'s neWindows).
Ngaphandle kwalokho, usithathephi leso sithombe sangemuva? Kubukeka kukuhle impela.
I-eliotime3000, ngoba anginakho ukuthwebula ukuthi imvelo ibinakho kanjani ngaphambi kokufaka isicelo sokushelela, kepha woza, bekungamakhilomitha, kunalokho eyayinakho kubuntu / kubuntu noma i-chakra, ngokusobala, yayicishe ibe ngaphansi ezingeni elifanayo windows, kepha uma uvule amakhasi e-web nge-firefox, ungabona ukuthi awakhululekile kangako ukuwabuka.
Ngithola izimali zonke kusuka konachan! 🙂
Nokho, bekungakacaci kimi, uma izinhlelo zokusebenza ezingathathi ukushelela kwefonti ziyi-qt noma ezingezona ze-qt, ngicabanga ukuthi yizona ezingezona i-qt, kepha esihlokweni sithi yizo ama-qt.
Ngingathanda ukukuzama kepha lokhu kungiphonsa emuva kancane, ngoba ngisebenzisa i-qtcurve nge-smaragd, futhi ngiyithanda kakhulu indlela ebukeka ngayo, manje uma ngifaka ukushelelisa ngiyaqonda ukuthi kufanele ngibe nezinhlelo zokusebenza eziningana ezinesihloko se-adwaita noma enye gtk ngenkani futhi yilokhu okwenza ngingabaze.
kugobolondo le-gnome, lawo angathathi i-anti-aliasing, uma esetshenzisiwe, yi-qt, yingakho kufanele wenze umyalo we-gconftool, ukubingelela.
Yebo, ngiyabonga pandev92, iphutha lami angibonanga ukuthi kwakuyigobolondo le-gnome (futhi ngafunda i-athikili yakho igobolondo le-gnome, hehe), ngiyazibuza ukuthi uma ngibuyela emuva ngizoba yini nenkinga efanayo ku-kde ukuthi i-gtk ayibambi bushelelezi, iyathakazelisa kakhulu ngiyabonga 🙂
Cha, kubeka kuphela i-anti-aliasing emuva, akunankinga :), ngakho-ke uma, ngaphandle kwe-anti-aliasing, amafonti ku-kde abukeka ebi kakhulu, ngakho-ke ngeluleka ukuthi uwasebenzise.
Yebo, akukho okuzodingeka ukuthi kusetshenziswe ku-kde ukubona umehluko, inqobo nje uma ungabuyela emuva.
Ngiyabonga kakhulu ngizozama
Ukuhlola i-ejenti yami yomsebenzisi xD
Ukhohliwe ukucacisa ukuthi ingeye-Gnome, ngoba ku-KDE font smoothing inikwe amandla ngokuzenzakalela.
Ngizamile i-kde, futhi imithombo ibukeka iyesabeka, uma ubheka i-athikili lapho ngithola khona lokho, uzobona ukuthi umfana usebenzise i-kde ...
Umbuzo wami uthi: ngabe ukushelela kwefonti kuhlangana kanjani nohlobo lwamaphakeji asetshenziswa ukusatshalaliswa?
Siyabonga nge-repo ye-opensuse.
Futhi hlola isithangami se-Infinality, lapho sichaza izinyathelo ezingeziwe zokuyilungisa kahle